पत्रपत्रीका | Samacharpati पत्रपत्रीका – Samacharpati
पोखरा । पोखरालाई खेलकुद सहरको रुपमा पहिचान दिलाउने उद्देश्यसहित आयोजित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन प्रतियोगिता शुरु भएको छ । भूतपूर्व खेलाडी मञ्च नेपालको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता पोखरा रंगशालाबाट शुरु भएको हो । म्याराथनमा सहभागी धावक सहरका विभिन्न माग परिक्रमा गरेर रंगशाला फर्केर दूरी पार गर्नेछन् । म्याराथनको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उद्घाटन गरेका छन् […]
सर्वोच्च पुग्यो रामघाटको विद्युतीय शवदाह विवाद
पोखरा, २६ असोज । रामघाटमा बन्ने भनिएको विद्युतीय शवदाहसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । स्थानीयले उच्च अदालत, पोखरामा दिएको रिट छिनोफानो हुन नपाउँदै सर्वोच्चमा अर्को रिट परेको हो । बस्ती नजिकै बन्न लागेको विद्युतीय शवदाहको विरोध गर्दै आएको बुद्धचोक वातावरण सुधार समितिको पहलमा जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो–पब्लिक)ले सर्वोच्चमा २१ गते रिट हालेको हो । […]
काठमाडौं : कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारले गर्ने आम्दानीमा देखिएको छ । सङ्क्रमण रोक्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण कर राजस्व सङ्कलन प्रभावित बनेपछि सरकारी ढुकुटी निकै खुम्चिएको छ । सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जेठ ३१ गतेसम्म छ खर्ब ४५ अर्ब ७० करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन […]
जनकपुरधाम: ‘मधेसीलाई भारतीय देख्ने कुण्ठा आजदेखि हटाइदिनुस्। अब राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ। मधेसी भनेपछि राष्ट्रियतामा शंका गर्ने ? नश्लीय चिन्तन बोकेकाहरू हटाइदेऊ, प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ’, समाजवादी जनता दलका नेता राजेन्द्र महतोले शनिबार संसद्मा दिएको यस भाषणले देशभर वाहवाही पायो। संसद्ले नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन पारित गर्नुअघिको छलफलमा नेता महतोले दिएको मन्तव्यले […]
साँच्चै मनमोहक छ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी
काठमाडौं : धेरैलाई लाग्न सक्छ– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्र अनकन्टार होला। भारतले वर्षौंदेखि कब्जा गरेको उक्त नेपाली भूमि खासमा साँच्चै मनमोहक छ। यताका कसैले टेक्न, देख्न नपाइरहेको उक्त भूमिबारे धेरैलाई कौतुहल बढ्दो छ। प्राकृतिक सुन्दरताको छुट्टै मोहक छरिरहेछ पराइले ओगटेको यो भागले। २०५८ सालमा दार्चुलाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रकाश लेखक सीमा विवाद नियाल्न कालापानीसम्म […]
क्लिनफिड लागू गर्ने तयारी
काठमाडौं : विदेशी टेलिभिजन च्यानल प्रसारकहरूले कात्तिक ८ गतेबाट अनिवार्य रूपले ‘क्लिनफिड’ प्रविधि लागू गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रसारण विभागले सोमबार यस्तो सूचना जारी गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन २०७६ को दफा ६ को उपदफा १ मा […]
सरकारी कार्यालयका आ-आफ्नै कार्यतालिका कर्मचारी आए, सेवाग्राही न्यून
काठमाडौँ : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लामो बन्दाबन्दीपछि सोमबारदेखि सरकारी तथा निजी कार्यालय खुलेका छन् । चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीमा आवश्यक सेवाबाहेक सरकारी तथा निजी कार्यालय, व्यवसाय, उद्योग बन्द रहेका थिए । लामो बन्दपछि खुलेकाले कतिपय कार्यालयले व्यवस्थापन मिलाउने क्रममा बिहान १० बजे मात्र कार्यालय सुरु गरेका थिए । […]
काठमाडाैँ : प्रहरी भीडन्तका नाममा मारिएका विभिन्न १२ वटा इन्काउन्टरका घटनालाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग अनुसन्धान समितिले ‘फेक’ ठहर गरेको छ। प्रहरीले इन्काउन्टर भन्दै निःशस्त्र व्यक्तिको हत्या गरेको गुनासोसहित परेका उजुरीमाथि विज्ञ समूहले अनुसन्धान गर्दा ती इन्काउन्टर ‘फेक’ भएको पत्ता लागेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअलि अन्सारी, फोरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती र […]
लगानी बोर्डले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनबाट दुई वर्षपछि हात झिकेको छ। लगानी बोर्डले निजी कम्पनी नेपवेस्टसँग परियोजना विकासको प्रारम्भिक सम्झौता गरेको करिब दुई वर्षपछि हात झिकेको हो । गत साउनमा उक्त सम्झौता गरेको बोर्डले पाँच दिनअघि अबको बाँकी सम्पूर्ण प्रक्रिया काठमाडौं महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको हो। एक दशकदेखि प्रक्रियामा रहेको सयौं पृष्ठको कागजातसहितको […]